Rugta naqshadeeyeyaasha Jamhuuriyadda Poland FOR FASAHA MADAXDA MAGAALADA
In kasta oo, xirfad dhisme waa xirfad madaxbanaan oo keeni karta qanacsanaan badan iyo faa'iidooyin maadi ah, laakiin wadada lagu bilaabayo shaqada dhisme ahaan ma ahan mid fudud ama gaaban. Marka lagu daro marxaladda muuqata ee daraasadda iyo daraasadda degdegga ah, naqshada dhismuhu waa inuu sidoo kale ka tirsan yahay IARP (Rugta naqshadeeyeyaasha Jamhuuriyadda Poland).
Sidee loo noqonayaa naqshadeeye?
Cinwaanka injineer dhisme ayaa la heli karaa ka dib markuu dhammaystiro daraasadaha wareegga koowaad. Shahaadada mastarka ee injineernimada dhismaha waxaa la helaa ka dib marka la dhammeeyo daraasadaha wareegga labaad. Cinwaanka, si kastaba ha noqotee, isla markiiba ma oggolaanayo ku-dhaqanka xirfadda. Sharciga Polishku wuxuu bixiyaa in kaliya qofka ku jira liiska Rugta Architects-ka ee Jamhuuriyadda Poland uu yahay naqshadeeye awood u leh ku shaqeynta xirfadda. IARP sidaa darteed waa albaabka kaliya ee xirfadeed ee loogu talagalay naqshadeeyaha doonaya inuu dhammaystiro mashruuciisii ​​ugu horreeyay ee ganacsi.
Eeg sidoo kale: IF Design Award 2020 oo loogu talagalay shirkadda Metalco ee loogu talagalay hoyga baska is-dhexgalka, oo qayb ka ah mashruuca SMART CITY
Rugta dhismaha ee Jamhuuriyadda Poland waa hay'ad shaqadeeda ugu weyn ku xusan sharciga ay tahay ilaalinta meelaha iyo, dhismaha oo dhan, oo loo arko in ay dadweynuhu wanaagsan yihiin. Intaa waxaa dheer, IARP waxay kormeertaa waxqabadka saxda ah ee howlaha farsamada ee loo adeegsaday dhismaha waxayna hubisaa tayada khibradda dhismaha ee loo isticmaalay takhasuska dhismaha. Dabcan, kormeerkani wuxuu daboolayaa kaliya xubnaha Rugta Architects ee Jamhuuriyadda Poland. Sababtaas awgeed, waxay muhiim ugu tahay naqshadeeye da 'yar oo doonaya inuu sameeyo hortiisii mashruuc ganacsiinay ka tirsan yihiin IARP.
Eeg sidoo kale: Sharciga dhismaha iyo qaab dhismeedka yar
Hawlaha iyo nashaadaadka Rugta qaabdhismeedka Jamhuuriyadda Poland
Rugta dhismaha ee Jamhuuriyadda Poland ayaa sidoo kale la macaamilaysa dhowr howlo dheeri ah, oo ay ka mid yihiin, kuwa kale: joogtaynta xirfadda naqshadeeye sida madax-bannaan, ilaalinta cinwaanka IARP Architect, horumarinta dhowr heerar la xiriira waxqabadka shaqada ee naqshadeeyeyaasha, ka shaqeynta qawaaniinta iyo hagaajinta xeerarka ajuurada xubnaha, iyo sidoo kale habsami u socodka soo bandhigida barnaamij ku habboon barnaamijka EU-da ee jaamacadaha Poland.
Marka la fulinayo hawlaheeda dheeriga ah, IARP waxay iskaashi la sameysaa isuduwaha xirfadeed ee dowlada ee injineerada dhismaha. Rugta dhismaha ee Jamhuuriyadda Poland sidoo kale waxay lashaqeeysaa tiro ururo kale ah si loo gaaro himilooyinkeeda. Rugta dhismaha ee Jamhuuriyadda Poland mas'uul kama aha oo keliya dejinta xeerarka shaqada iyo heerarka, laakiin waxay sidoo kale la macaamilaan shaqada waxbarashada, sayniska, dhaqanka iyo shaqada cilmiga-farsamada.
In kasta oo ay tahay waxqabadka guud ee caddaaladda ee IARP, haddana waa in la xusuusnaado in yoolkeeda guud ee ugu weyni yahay in la ilaaliyo meelaha bannaan iyo qaab dhismeedka oo ah wax guud oo wanaagsan. Dhamaan nashaadaadka iyo guud ahaan qaab dhismeedka IARP si sax ah ayaa loogu wajahan yahay hadafkan, dhammaan howlaha nashaadaadna waa in la arkaa halkii lagu dari lahaa waxqabadka udub-dhexaadka ah.
Qaab dhismeedka IARP wuxuu ka kooban yahay Rugta Qaranka ee Farshaxanka iyagoo la kaashanaya mas'uuliyiinta, iyo sidoo kale 16 qol oo degmo oo ah naqshadeeye
Xuquuqda iyo waajibaadka xubnaha
Ahaanshaha xubinimada IARP, xubnahu waxay ku kalsoonaan karaan xuquuqyada qaarkood iyo xuquuqaha aysan awoodi doonin inay ku raaxeystaan ​​iyagoon xubin ka ahayn guddiga. Dhanka kale, xubinnimada Golaha Rugta Hab-dhiska ee Jamhuuriyadda Poland sidoo kale waxay leedahay waajibaadyo gaar ah.
Waajibaadkaan waxaa ka mid ah: dhawrista anshaxa xirfadda iyo ku habboonaanta qawaanihiisa, wadashaqeynta Rugta Dhismaha ee Jamhuuriyadda Poland, u hoggaansanaanta qawaaniinta iyo xeerarka la xiriira aqoonta farsamada iyo dharka dharka, adoo tixgalinaya go'aamada IARP iyo bixinta khidmadaha xubinnimada joogtada ah.
Xubnaha IARP waxay kuxiran karaan xuquuqaha iyo mudnaanaha soo socda: waxay isticmaali karaan howlaha iskaa wax u qabso ah iyo caawinta sharciga ee qolka, waxayna ku kalsoonaan karaan caawinta kor loogu qaadayo aqoontooda xirfadeed.
Guddiga Tayaynta Qaranka
Markaad wax ka qoraysid Rugta Dhismeyaasha ee Jamhuuriyadda Poland, waa wax aan macquul ahayn in aan la xusin Guddiga U-qalmitaanka Qaranka. Waxay mas'uul ka tahay bixinta shahaadooyinka xirfadeed. Waa jir gaar ah kaas oo sidoo kale lagu qeexay qawaaniinta qolka. Shaki la'aan, dhisme kasta oo doonaya inuu helo aqoontiisa waa inuu la macaamilaa Guddiga Shahaadooyinka Qaranka. Intaas waxaa sii dheer, howlaha Guddiga Shahaadooyinka Qaranka sidoo kale waxaa ka mid ah kormeerka howlaha guddiyada xulashada, howlahoodana waxaa lagu qeexay Sharciga iyo xeerarka ay tahay inuu ku dhex shaqeeyo.
Maalgelinta Rugta Dhismaha Dhismaha ee Jamhuuriyadda Poland
Si ay IARP u shaqeyso, waxay u baahan tahay inay ku shaqeyso hanti gaar ah. Ujeeddooyinka maalgelinta howlaheeda, Rugta dhismaha ee Jamhuuriyadda Poland waxay ka heshaa lacagaha ajuurada xubinnimada, howlaha ganacsiga, tabarucyada iyo kaalmooyinka, iyo sidoo kale dakhliyada kale. Hawlaha dhaqaalaha ee ay qaadi karaan qolalka degmada iyo rugta guud ee Qaranka ee IARP ma ficil ahaan way xadidan tahay, hase yeeshe, ma noqon karto waxqabadyo maalgashi iyo nashaadyo la xiriira naqshadeynta, dhismaha, howlaha guud iyo qiimeynta dhismaha. Xayiraadaha noocan oo kale ah waa inay u ekaadaan sidii qof aan la yaab lahayn - dhaqdhaqaaqa ganacsiga waa inuusan saameyn ku yeelan madax-bannaanida Rugta Architects ee Jamhuuriyadda Poland.
Eeg sidoo kale: Qashin-qubka jidadka casriga ah oo qayb ka ah qaab dhismeedka magaalada
Rugta hoose ee Silesian Rugta naqshadahaqolka dhismayaashaguriga naqshadeeyayaasha gdańskRugta naqshadeeyeyaasha KatowiceRugta naqshadeeyayaasha Krakowguriga naqshadeeyayaashaguriga architects loginRugta naqshadeeyeyaasha LublinRugta naqshadeeyeyaasha Olsztynguriga naqshadeeyayaasha poznańRugta naqshadaha ee Jamhuuriyadda PolandRugta naqshadaha ee Jamhuuriyadda PolandRugta Silesian ee Farshaxankaqolka awoodaha naqshadeeyayaashaRugta naqshadeeyayaasha Warsawqolka naqshadeeyeyaasha rinjławqolka dhismaha qaranBeródź Rugta naqshadahaRugta dhismaha ee MałopolskaRugta dhismaha ee MałopolskaRugta dhismaha ee MazoviaRugta dhismaha ee MasovianRugta dhismaha OpoleRugcadaaga Polish-kaRomeranian Rugta ArchitectsRugta Silesian ee FarshaxankaRugta dhismaha ee SilesianWielkopolska Rugta naqshadeeyeyaashaRugta Dhismaha Galbeedka Pomeranian